OWEZINKANYEZI UKHUTHAZA ABABHALI NGOKUQONDA ULWIMI LWABO LWEBELE – Sivubela intuthuko Newspaper
USEBASTIAN Jili odle umhlanganiso kwi-Avbob Poetry Competion olwimini lwesiZulu.
UMHLAZIYI wezinkanyezi obuye abe ngumbhali wezincwadi nemidlalo yomoya uSebastian Jili waseMgungundlovu ukhuthaza ababhali abasafufusa ngokuba mabazifune ngokuqonda ulwini lwabo lwebele uma bengena emkhakheni wokubhala.
USebastian usho kanje ekhuluma ngomklomelo wakhe wendodo njengoba ebaqwaqwade bonke amakhanda abeqhathwe nabo emncintiswaneni wezinkondlo obuhlelwe ngabakwa-Avbob obubizwa nge-Avbob Poetry Competition obuseGallagher Convention Centre eMidrand eGoli obungale nyanga u-August. Lo mncintiswano obuwenziwe ngobuchwepheshe besimanje, ophikweni lwesiZulu bewenganyelwe nguSol Mandla Abednego Maphumulo njengoba zonke izilimi bezimelelekile lapha.
Azibonga ngakho uSebastian ngokudla umhlanganiso uthi ngukuqonda kahle ulwimi lwakhe lwebele nokubheka ukuthi konke lokho akubhalayo kuzoba nomthelela onjani emphakathini. “Bengiqala ukungena emkhakheni wezinkondlo njengoba ngingumuntu obhala kakhulu ama-novel nezindatshana ezimfishane kuze kufike nasemidlalweni yomoya. Lokhu kokungena emkhakheni wezinkondlo bengizwa amanzi ngobhoko ngakho futhi bengingabhekile lutho kukhona ngoba bengingakaze ngilunguze. Kungimangazile uma igama lami selitonyulwa ngaba phambili kwabaphumelele kulo mncintiswano. Ngibonga uSol Maphumulo ngokuzinikeza isikhathi abheke ulwimi ebengilusebenzisile ukuthi ngabe luyilona lona yini lwesiZulu,” usho kanje.
Eqhubeka uSebastian ubonge bonke abantu abamesekayo ekubhaleni kwakhe nabakhekayo ngemibhalo yakhe kusukela ekuhlaziyweni kwezinkanyezi ezikulona leli phephandaba njengoba edume ngazo kwabaningi. “Ulwimi yilona olumqoka ekubhaleni futhi kumele uqikelele ukuthi konke okubhalile kuyezwakala kofundayo. Makube ngulwimi oluzokwamukelwa yibona bonke abantu ngokuhlukana kweminyaka yabo kungabi khona lapho okuzothiwa lapha kulungele ukufundwa ngabaneminyaka ethize kuphela,” usho kanje.
USebastian lapha ukhale wemuka nomklomelo kaR10 000, i-voucher kaR2500 yokuthenga izincwadi kanye nendondo le ebibangwa ebizwa nge-Avbob Poetry Trophy Competion.